I-Wiko View2: i-intshi ye-6 ine-19: 9 ifomathi yee-euro ezingama-199 kuphela | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseFrance iWiko ikwazile ukwenza into ebalulekileyo emhlabeni weefoni, emi phakathi kwenani elikhulu labavelisi baseAsia abaqale ukuthatha imakethi ngokukopa ii-greats zeefoni, bekopa kungekuphela kuyilo, kodwa nakwisigama.
UWiko usandula ukuthengisa itheminali leyo kufuneka sithathele ingqalelo Ukuba siceba ukuvuselela i-smartphone yethu kwaye ukhetho lwee-smartphones zaseAsia aluhambi entlokweni yethu. I-Wiko View2 sisiphelo esisinika isikrini se-intshi ezi-6 nge-19: 9 fomathi kunye nekhamera esemva ye-13 mpx kunye nekhamera yangaphambili ye-16 mpx yee-euro ezingama-199 kuphela.
I-Wiko View2 imile, hayi kuphela ngezibonelelo ezisinika zona, kodwa kwanoyilo lwayo, uyilo lonke lwescreen Iphefumlelwe yi-smartphone yokuqala ephumeze inotshi kwii-smartphones, iFowuni ebalulekileyo, ngendlela yokuba indawo ephezulu yesikrini ayisinikeli ishiya elikhulu ngaphandle kwesizathu, kodwa ihlala kuphela kwikhamera ye-16 mpx.
Isikrini se I-intshi ezi-6 ezine-19: 9 ifomathi isinika isisombululo se-HD + ngetekhnoloji ye-IPS, ke siya kuba nakho ukufikelela kumxholo wayo ukusuka kuyo nayiphi na i-engile yombono, isikrini esinika ukhuseleko lweglasi yeCorning Gorilla. Ngaphakathi sifumana iprosesa eyi-8 GHz 1,4-core, ehamba ne-32 GB yokugcina kunye ne-3 GB ye-RAM. Ibhetri ye-3.000 mAh isinika ngaphezulu kokuzimela ngokwaneleyo ukuhlala yonke imini ngaphandle kwengxaki.
Ngokumalunga nokhuseleko, iWiko View2 iyadibana inkqubo yokwamkelwa kobuso esivumela ukuba sisivule ngokukhawuleza isiphelo sendlela ukongeza kwiminwe yokubamba iminwe ngasemva. Enkosi kwi-chip ye-NFC sinokwenza intlawulo ngokuthe ngqo ngaphandle kokuba siphathe isipaji kunye nawe.
Ikhamera yangemuva yeWiko View2 ifikelela kwi-13 mpx, kwaye ine-LED flash, kunye nokuvula, kancinci, f / 2,0 ukongeza kwinkqubo ye uzinzo lwevidiyo. Ngaphambili, sifumana ikhamera ye-16 mpx enetekhnoloji ye-Big Pixel, esivumela ukuba sifumane iziphumo ezigqwesileyo xa sithatha ii-selfie ekukhanyeni okuphantsi.
I-Wiko View2 iyafumaneka, okwangoku, ngaphakathi umbala weAnthracite Mnyama ngokugqitywa chrome. Unobungakanani be-154,4 x 72 x 8.3 mm kunye nobunzima be-153 gram. Ixabiso li-euro ezingama-199.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Wiko View2: i-intshi ye-6 ine-19: 9 ifomathi yee-euro ezingama-199 kuphela
I-NIU iveza i-eScooter yayo efanelekileyo yombane, i-N1
IGraphene ivumela ukukhanya ukufikelela kwiindawo ezincinci njengobubanzi beathom